April 2019 - Uptodate MM
Uptodate MM | April 30, 2019
အာကာသနှင့် ပတ်သက်ပြီး.. လာမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလအတွင်းမှာ ထူးခြားမယ့် ဖြစ်စဉ်အချို့ကို အာကာသနှင့်စကြဝဠာ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအတွက် ရေးသားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ လက်ရှိ လဆန်းပိုင်းမှာ အထူးရေပန်းစား သတိပြုသင့်တာကတော့ စူပါ ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီး ဖာနီ (Fani) ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခုအတွင်းသို့ ကြီးမားတဲ့ လေစိုင်များ လှည့်ပတ်စီးဝင်တိုက်ခတ်ခြင်းမှ “လေမုန်တိုင်း” များ ဖြစ်လာကြပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလအတွက် ထူးခြားမည့် ဖြစ်စဉ်များ အာကာသနှင့် ပတ်သက်ပြီး.. လာမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလအတွင်းမှာ ထူးခြားမယ့် ဖြစ်စဉ်အချို့ကို အာကာသနှင့်စကြဝဠာ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအတွက် ရေးသားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ လက်ရှိ လဆန်းပိုင်းမှာ အထူးရေပန်းစား သတိပြုသင့်တာကတော့ စူပါ ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီး ဖာနီ (Fani) ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခုအတွင်းသို့ ကြီးမားတဲ့
(၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန် ( စ/ဆုံး ) အပြည့်အစုံ (၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်း ငါးထောင် အထူးဆုကြီး သိန်း ၁၅၀၀၀ ကခ ၅၈၅၀၂၄ မိုးယံ(၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ငါးထောင် ဆုကြီးများ (၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ငါးထောင် ဆုကြီးများ သိန်း ၅၀၀၀
ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန်…
(၃)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် သိန်းတစ်သောင်းခွဲမှငါးသိန်းဆုအထိအက္ခရာနဲ့ဂဏန်းအားလုံးအစဉ်လိုက်တူရမည် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကခ ၅၈၅၀၂၄ သိန်းငါးထောင် ဎ ၈၃၄၁၄၇ ဗ ၆၂၆၂၈၆ သိန်းနှစ်ထောင် သ ၃၅၈၇၉၈ ဓ ၇၀၅၅၈၈ ဌ ၇၁၄၅၈၉ သိန်းတစ်ထောင် ဈ ၆၉၆၉၇၉ ဒ ၁၁၉၇၈၅ ခ ၇၇၂၄၃၅ ဂ ၇၇၃၀၇၂ Postတစ်ခုချင်းထီပေါက်စဉ်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့Pageအားlikeလုပ်ပေးထားပါခင်ဗျပေါင်းချုပ်နဲ့ပြန်တိုက်ပါ
ထီဆုများကို အထူးဆုအနေဖြင့် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆု၊ ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆု၊ ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆု ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆု၊ ဆုတစ်ဆုချင်းစနစ်မှ ကျပ်သိန်းငါးရာဆု၊ ကျပ်သိန်းနှစ်ရာဆု၊ ကျပ်သိန်းတစ်ရာဆု၊ ကျပ်သိန်းငါးဆယ်ဆု၊ ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်ဆု၊ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းဆု၊ ကျပ်သိန်းငါးဆယ်ဆုများနှင့် ဝေဝေဆာဆာ ဆုမဲများဖြစ်သည့် ကျပ်သုံးသိန်းဆု ကျပ်နှစ်သိန်းဆု နှင့် ကျပ်ငါးသောင်းဆုများကို ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထီဆုမြားကို အထူးဆုအနဖွေငျ့ ကပျြသိနျးတဈသောငျးငါးထောငျဆု၊ ကပျြသိနျးငါးထောငျဆု၊ ကပျြသိနျးနှဈထောငျဆု ကပျြသိနျးတဈထောငျဆု၊
လက်ဖြတ်ပစ်ရတော့မယ့် ၄ နှစ်အရွယ် ကလေးလေး အတွက် ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါဦး
အရိုးကင်ဆာကြောင့်လက်ဖြတ်ရတော့မယ့် ကလေးလေး:) သားလေးနာမည်ကပြည့်ဖြိုးလင်း အသက်က၄နှစ်ပဲရှိပါသေး တယ်။သားလေးကလွန်ခဲ့တဲ့၎လကညာဖက်လက်မောင်းက အရမ်းရောင်လာလို့ င်ဆာလက်ဖြတ်ရမယ်။ကလေးဝမြို့ နယ်၊ကျွဲကူးရွာကနေ မန္တလေးကုတင်၅၅၀ကလေးဆေးရုံမှာ ဆေးလာကုနေရပါတယ်။ဆရာဝန်များက သားလေးရောဂါ မှာအရိုးကင်ဆာဖြစ်ပြီး ရောဂါဆက်မပွားရန်အတွက်လက် ကိုဖြတ်တောက်ရမယ်လို့သိရပါတယ်။အဖေဖြစ်သူမှာလဲ လက်ထဲပိုက်ဆံသိပ်မရှိတာကြောင့် ဆေးကုသရန်အလှုငွေ ငါးသောင်းကျပ်ပေးလှုခဲ့ပါတယ်။စေတနာ့အလှုရှင်မှာ ကိုလင်း + မဖြူဖြူ သင်း သားမောင်လွင်ဘုန်းခန့်တိမ်လွှာ အသံချဲ့စက်မိသားစုမှလှုဒါန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ONE TO ONE ကလေးလူနာကူညီရေး ကိုဝမ်း
ပဲခူးမြို့မှာ အပူလျှပ်၍ (၁၀) ဦး ဆေးရုံတက်ရာ (၄) ဦးသေဆုံး
အထူးသတိထားကြပါနော်.. ပဲခူးမြို့မှာ အပူလျှပ်၍ (၁၀) ဦး ဆေးရုံတက်ရာ (၄) ဦးသေဆုံး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း နေ့အပူချိန်များမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဧပြီလ ၂၂ ရက်မှ ၃၀ ရက်ထိ တစ်ပတ်ကျော်အတွင်း အပူလျှပ်ခြင်း (Heat Stroke) ကြောင့် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူရသူ အရေအတွက် ၁၀ ဦး အထိရှိခဲ့ပြီး ယင်းအနက် ၄
“မင်​မဲ့စရိုက်​ဆန်​စွာ အနိူင့်​အထက်​ပြုကျင့်၍အုပ်​စုဖွဲ့လူသတ်​မှု့ကျူးလွန်​သူများအား ဥပ​ဒေနှင့်​အညီ အ​ရေးယူ​ဆောင်​ရွက်​​ပေးပါရန်​” ကျွန်​​တော်​၏သား​ ​မောင်​​အေးချမ်း​ကျော်​သည်​ အသက်​(၁၅)နှစ်​သာရှိ​သေးပြီး တက္ကသိုလ်​ဝင်​တန်းစာ​မေးပွဲ​ဖြေဆိုထားသူလည်းဖြစ်​ပါသည်​။ တရားသူကြီး ၊ ဥပ​ဒေအရာရှိ ၊ မူးယစ်​ ဒုရဲအုပ်​ ၊ အ​ထွေ​ထွေအုပ်​ချုပ်​​ရေး ဒုဦးစီး ရာထူးများအတွက်​ ရည်​မှန်းထားသူလည်းဖြစ်​ပါသည်​။ ၅.၄.၂၀၁၉ ည၁၁း၃၀ခန့်​အချိန်​တွင်​ မန္တ​လေးမြို့၊ချမ်းမြသာစည်​မြို့နယ်​ ၊ မြို့သစ်​(၄) ၆၅လမ်းနှင့်​​အောင်​မင်္ဂလာလမ်း​ဒေါင့်​ ​တွင်​ မည်​သည့်​ရန်​ငြိုး မည်​သည့်​အပြစ်​မှမရှိပါဘဲ
“ညီမကိုလည်း လုပ်ကြံပြီးလုပ်တယ်ပြောတယ်၊ ညီမကိုယ်ချင်းစားလို့ ကူညီတာပါ ၊ ညီမကို ရူးတယ်လို့လည်းပြောကြတယ် ….
မြမြ၀င်ပူးခံရသူ မဇာခြည်လွင် နဲ့ မဝေဇင်ထွန်း တို့ ပြောပြီ ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ ကျောက်စိမ်းစက်ရုံတာဝန်ရှိသူများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မှာ မြမြ၀င်ပူးခံရသူ မဇာခြည်လွင် နဲ့ မဝေဇင်ထွန်း တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်များကို ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ။ “ညီမကိုလည်း လုပ်ကြံပြီးလုပ်တယ်ပြောတယ်၊ ညီမကိုယ်ချင်းစားလို့ ကူညီတာပါ ၊ ညီမကို ရူးတယ်လို့လည်းပြောကြတယ် ၊ အခုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရှိတယ်ပြောလို့လာတာပါ ၊
ကျောက်စိမ်းစက်ရုံ မြမြဝိညာဉ်ပူးကပ်မှု တရားဝင် ရှင်းပါပြီ…..
မြမြဝိညာဉ်ပူးကပ်မှု ကျောက်စိမ်းစက်ရုံမှ တရားဝင် ရှင်းပြီ ( ရုပ်သံ ) မြမြဝိညာဉ်ပူးကပ်မှု ကျောက်စိမ်းစက်ရုံတာဝန်ရှိသူများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် . .စာရင်းဇယားတွေရှိချက်များ နယ်မြေကွင်ဆင်းလေ့လာမှုများ ဗီဒီယိုဖိုင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ …. လူမှုကွန်ယက်မှာပျံ့နှံ့နေတဲ့ဝိညာဉ်ဝင်ရောက်ပူးကပ်ပြောဆို မှုမှာ မှန်ကန်မှုမရှိသလို ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းလည်းမရှိကြောင်း ကျောက်စိမ်းစက်ရုံHR မန်နေဂျာကို ဇော်ဇော်အောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြမြဝိညာဉ်ဝင်ရောက်ပူးကပ်မှုဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးပြောဆိုလိုက်တာပါ။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဝိညာဉ်ဝင်ရောက်ပူးကပ်ခံရသူမဇာခြည် လာရောက်ခဲ့ပြီး